ဖူးနုသစ်: ကင်းတဲ ၃
အမှန်တကယ်ကတော့ ခေတ်ကြီးကိုက မကောင်းတာပါ။ ခေတ်ကာလ သားသမီးတွေ အိုင်ပက်တဲ့ သူကပက် ဂယ်လက်ဆီ တက်ဘ်တဲ့သူက တက်ဘ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်း မနေနိုင် မထိုင်နိုင် ရွစိတက် လာပါတယ်။ သူလိုကိုယ်လို လမ်းသွားရင်း ဟိုနှိပ် ဒီနှိပ် ဟိုပွတ် ဒီပွတ် လုပ်ဖို့ တက်ဘလက် တစ်ခုလောက် လိုချင်လာပါတယ်။ ဘယ်တက်ဘလက် ဝယ်ရင် ကောင်းမလဲ စဉ်းစားတော့ ဘလက်ဘယ်ရီ ရဲ့ အမာခံ ပရိသတ် မို့ Playbook တစ်ခုလောက် ဝယ်ရင် ကောင်းမလား စဉ်းစားမိ ပါသေးတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဘာလုပ်ချင်တာလဲ ပြန်မေးတော့ စာအုပ်ဖတ်ဖို့နဲ့ သီချင်းနားထောင် ဖို့က လွဲရင် တက်ဘလက်ကို တခြားနေရာ ဘယ်နေရာ သုံးရမလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားမရပါဘူး။ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာတို့ ဂိမ်းဆော့တာတို့ကလည်း စိတ်ကူးပေါက်မှ တစ်ခါ ထလုပ်တတ်တာမို့ ကျွန်တော့် အတွက်တော့ သွားရင်လာရင်း သုံးဖို့ သိပ်မလိုအပ် ပါဘူး။ အဲဒီတော့ အီလက်ထရွန်းနစ် စာအုပ်ဖတ်စက် တစ်ခုလောက်ပဲ ဝယ်ဖို့ စဉ်းစားမိပါတယ်။ ကိုဒီဘီရဲ့ ပို့စ်ကိုဖတ်ပြီး nook ဝယ်ရရင် ကောင်းမလား ဖြိုးမော်ရဲ့ ကင်းဒဲလ်ပို့စ် ကို ဖတ်ပြီးတော့ ကင်းဒဲလ် ဝယ်ရရင် ကောင်းမလား အကြိတ်အနယ် စဉ်းစားဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ပဲ နောက်ဆုံးမှာတော့ အမေဇုန် အင်တာနက် စတိုးကို ဝင်ပြီး ကင်းဒဲလ် သရီး တစ်ခု ဝယ်ဖြစ်လိုက်ပါတယ်။ ကင်းဒဲလ်သရီးမှာ 3G သုံးလို့ ရတဲ့ ဗားရှင်းနဲ့ ဝိုင်ဖိုင်ပဲ သုံးလို့ရတဲ့ ဗားရှင်း နှစ်ခု လာပါတယ်။ ဝိုင်ဖိုင် ဗားရှင်းမှာမှ ကြော်ငြာပါတဲ့ ဗားရှင်းနဲ့ ကြော်ငြာမပါတဲ့ ဗားရှင်းဆိုပြီ:တော့ ထပ်ကွဲသွားပါတယ်။ အင်တာနက်ထဲမှာ တခြားသူတွေ ရေးထားတဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေ လိုက်ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ နောက်ဆုံး ကြော်ငြာမပါတဲ့ ဝိုင်ဖိုင် ဗားရှင်းနဲ့ သားရေဖုံး တစ်ခု ဝယ်ဖြစ်လိုက်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံလည်း ပေးဝယ်ရသေးတယ် ကြော်ငြာလည်း ကြည့်ရဦးမယ် ဆိုတော့ စိတ်ထဲမှာ နည်းနည်း အောင့်သက်သက် ဖြစ်လို့ပါ။
အမေဇုန်က ကင်းဒဲလ်ကို တရားဝင် ရောင်းတဲ့ နိုင်ငံတွေ ထဲမှာ စင်ကာပူ မပါပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် နည်းနည်း အကြံအဖန် လုပ်ရပါတယ်။ ကြားခံ Forwarder တစ်ခု သုံးရပါတယ်။ အမေရိကားကနေ စင်ကာပူကို ပို့ဖို့ VPost ၊ Borderlinx နဲ့ ComGateway ကုမ္ပဏီတွေ ထဲက တစ်ခုခုကနေ တဆင့် ဝယ်ရပါတယ်။ အဲဒီကုမ္ပဏီတွေမှာ မှတ်ပုံတင်ရင် အမေရိကန်လိပ်စာ တစ်ခု ထုတ်ပေးပါတယ်။ သူတို့ပေးတဲ့ လိပ်စာနဲ့ အမေဇုန်မှာ ဝယ်တော့ အမေရိကန် ကပ်စတန်မာ တစ်ယောက် အနေနဲ့ ဝယ်လို့ရပါတယ်။
ကံကောင်း ထောက်မချင်တော့ ကျွန်တော့်မှာ ရှိနေတဲ့ ခရက်ဒစ်ကတ်ဒ် တစ်ခုက VPost နဲ့ တွဲပြီး ပရိုမိုးရှင်း လုပ်တာကြုံလိုက်ပါတယ်။ အမေရိကားကနေ စင်ကာပူ အရောက် ပို့ဆောင်ခ ၂ ဒေါ်လာခွဲပဲ ပေးလိုက်ရပါတယ်။ ဝယ်ထားပြီးတော့ ကြားထဲမှာ စနေတနင်္ဂနွေတွေ အမေရိကန် အမျိုးသားနေ့တွေ ခံနေတာနဲ့ အတော်နဲ့ ရောက်မလာပါဘူး။ ၁၀ ရက်လောက် ကြာမှပဲ လက်ထဲကို ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ရောက်လာပါတော့တယ်။
ကင်းဒဲလ် ဝယ်ပြီးတော့ လက်ထဲကို ရောက်မလာခင်မှာ အမေဇုန်ကနေ စာအုပ်တွေ ကြိုတင် ဒေါင်းလုပ် လုပ်ထား လိုက်ပါတယ်။ အမေဇုန်မှာ ကင်းဒဲလ်အတွက် အလကားပေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ အီစွပ်ပုံပြင်၊ ဂရင်းညီနောင် ပုံပြင်၊ တစ်ထောင့်တစ်ညပုံပြင် လို ပုံပြင်စာအုပ်တွေ၊ ရှားလော့ဟုမ်း၊ အလန်ကွာတာမိန်းစာအုပ်တွေ၊ ဆမ်းမားဆက်မွန်ရဲ့ ဝတ္ထုတိုတွေ၊ ဂျိမ်းဂျွိုက်စ်၊ တော်စတွိုင်းရဲ့ ဝတ္ထုတွေ စတာတွေက အလကားပေးတဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ ပါပါတယ်။ ကပ်ဖ်ကာတို့၊ ကမူးတို့ စာအုပ်တွေက အလကားမပေးပေမယ့် တစ်အုပ်ကို ၁ ဒေါ်လာ နဲ့ ၅ ဒေါ်လာ ကြားလောက်ကျတာမို့ စာအုပ်ဝယ်တာထက် စာရင် ပစ္စလက္ခတ်တန်တယ် ပြောလို့ရပါတယ်။
အမေဇုန်က ကင်းဒဲလ်အတွက် စာအုပ်ဝယ်ရင် အမေရိကန် ခရက်ဒစ်ကတ်ဒ် မှ ရောင်းတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံခြား ခရက်ဒစ်ကတ်ဒ်နဲ့ အမေဇုန်က Gift ကတ်ဒ် ဝယ်၊ ပြီးမှ Gift ကတ်ဒ်ကိုသုံးပြီး စာအုပ်ဝယ်ရင်တော့ ရတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ အခုထက်ထိတော့ စမ်းမကြည့်ဖူးသေးပါဘူး။
အမေဇုန်က အလကားပေးတဲ့ စာအုပ်တွေက .azw extension နဲ့ ဖိုင်တွေပါ။ ကျွန်တော် အဓိက ကင်းဒဲလ်ဝယ်ရတဲ့ ရည်ရွက်ချက်က ကျွန်တော့်မှာ ရှိတဲ့ PDF ဖိုင်တွေကို သွားရင်းလာရင်းနဲ့ ဖတ်ချင်လို့ပါ။ ကင်းဒဲလ်မှာ PDF ဖတ်လို့ရပေမယ့် ဒီအတိုင်း ဖတ်ရင် စာလုံးက အရမ်းသေးပါတယ်။ Zoom ဆွဲတော့လည်း ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ဆွဲလို့ မရတာမို့ သိပ် အဆင်မပြေပါဘူး။ နောက်ဆုံးတော့ ရှာဖွေလေ တွေ့ရှိလေ ဆိုသလိုပဲ PDF ဖတ်ဖို့ နည်းလမ်း ၂ ခု တွေ့သွားပါတယ်။
ပထမ တစ်မျိုးက အင်္ဂလိပ် ဝတ္ထုစာအုပ်တွေပါ။ ဝတ္ထုစာအုပ်တွေမှာ ပုံမပါတော့ Format ပြောင်းရတာ လွယ်ပါတယ်။ ကယ်လီဘာ (Calibre) ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို သုံးပြီး .mobi Format ကို ပြောင်းပြီးမှ ကင်းဒဲလ်ထဲကို ကူးထည့်ရင် ဖတ်ရတာ အဆင်ပြေပါတယ်။ ကင်းဒဲလ်က တခြား azw စာအုပ်တွေ ဖတ်ရတာ နဲ့ မကွာပါဘူး။
ဒါပေမယ့် .mobi Format ပြောင်းလို့ မလွယ်တဲ့ စာအုပ် နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။ ပထမတစ်မျိုးက မြန်မာစာအုပ်တွေပါ။ မြန်မာစာအုပ်ကို .mobi Format ပြောင်းရင် ပုံတွေပဲ ပါလာပါတယ်။ စာတွေ ပါမလာတော့ပါဘူး။ နောက်တစ်မျိုးက နည်းပညာ ဆိုင်ရာ စာအုပ်တွေပါ။ အဲဒီစာအုပ်တွေကတော့ .mobi Format ပြောင်းရင် စာပဲ ပါလာပါတယ်။ ပုံက ပါမလာတော့ပါဘူး။ PDF နဲ့ ဆိုရင်တော့ မြန်မာစာအုပ်ရော နည်းပညာဆိုင်ရာ စာအုပ်တွေပါ စာရော ပုံရော အကုန်ပေါ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့လည်း ရိုးရိုးရှင်းရှင်း နည်းလမ်းပဲ ရှာတွေ့သွားပါတယ်။ PDF ကို ဒီအတိုင်း ဖွင့်ပြီး View ကို Landscape ပြောင်းပြီး ၉၀ ဒီဂရီ လှည့်ဖတ်တော့ အားလုံး အဆင်ပြေသွားပါတယ်။ :D
အခုတော့ မျောက်အုန်းသီးရသလို ကင်းဒဲလ် တစ်လုံးနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေပါတယ်။ ဖတ်မိတဲ့ စာအုပ်တွေထဲက ကောင်းတာလေးတွေ တွေ့ရင် အဲဒီ စာအုပ် အကြောင်းတွေ ဘလော့ခ် ပေါ်မှာ ပြန်ပြီး ဝေမျှ ပါမယ်။ တခြား ကင်းဒဲလ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ သိတာလေးတွေ ရှိထားလို့ ကွန်မန့်ရေးပြီးဝေမျှ ပေးမယ် ဆိုရင်တော့ ကျေးဇူး အထူး တင်မိမှာပါ။
(ဓာတ်ပုံရိုက်ရမှာ အလုပ်ရှုပ်လို့ Wikipedia ကနေပဲ ဓာတ်ပုံ သွားမလာခဲ့ပါတယ်။ )
Posted by ZT at 1:59 PM
Labels: နည်းပညာ, ပေါက်တတ်ကရ
ကင္းဒဲ ပိတ္သတ္တိုးလာပီေပါ့ေလ ၾကိဳဆိုပါ၏
calibre နဲ့ သတင်းစာတွေ အလကားဖက်လို့ ရပါ၏။ စမ်းပြီးပါပြီလား?
မြန်မာဖောင့်တွေ အသုံးပြုလို့ ဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်လည်း လက်တို့ပါဦး တာကိုး XD
Vista-> you are the most senior kindle fan. :D
Anonymous-> Thanks for your information. I will try it.
HMM -> :P
PM-> Sure. Let's share the information.
ျမန္မာလုိေရးထားတဲ့ pdf file ေတြကို ဖတ္လို.ရသလားခင္ဗ်ာ ။ အဲလိုဖတ္လို.ရရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္လည္း kindle3ကုိ ဝယ္မယ္လို. စိတ္ကူးရွိလုိ.ပါ ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ။
welcome aboard to K3 fan :D
takealook at my blog, I wrote something about K3 long long ago. and still finding way to read mm ebook on it, obviously not successful. (http://nyimuyar.blogspot.com/search/label/Kindle)
takealook at my blog, I wrote something about K3 long long ago. and still finding way to read mm ebook (non pdf) on it, obviously not successful. (http://nyimuyar.blogspot.com/search/label/Kindle)
Anonymous-> Yes, you can read most of Myanmar PDF file in Kindle 3.
Ko Nyimuyar-> Thanks for your information.
I also just bought Kindle3from Singapore (Ebay), cost me SGD 209. After buying it, I gotacontact that selling Wifi version only with SGD 180.
Hi ... I have just received Kindle touch 3G, which seems to be running android and support Unicode fonts .....
I can see my Myanmar PDF files names, then I have tried both Zaw Gyi and Unicode fonts on the file names.... yes.... Unicode is really working.. that's coollllllllllll
စိတ်ဝင်စားစရာ အချက် (၄၀)